« Riban-kiran’Imerina »: kanto ny tolotra, tsy tonga ny mpijery | NewsMada
« Riban-kiran’Imerina »: kanto ny tolotra, tsy tonga ny mpijery
Fampisehoana nahitana ireo tanora manan-talenta ikoizana sy ireo mpanakanto zoky iangonan’ny traikefa matanjaka ny tetsy amin’ny CCEsca Antanimena omaly. Nifanaraka tamin’izay rahateo ny tolotra teny an-tsehatra…
« Riban-kiran’Imerina », fampisehoana tsy fahita matetika ! Tarika Manan’Ara, Efajoro, samy mampiray tanora maneho ilay gadona sy feo ary tononkira mampiavaka an’Imerina. Na ny fomba nitendrena ny gitara na ilay feo ravahin’ny angola, kanto avokoa. Tahaka izany koa ny seho nentin’ny tarika R’Imbosa, Feogasy, Kolibera, Ifanihy, Ramilison Besigara. Nohamafisin’i Kolibera, nandritra ny fanentanana nataony, ihany koa io tranga io. « Vitsy ianareo no tonga. Izahay kosa, afaka manome ny kanto indrindra avy aty anatinay », hoy izy. Ity andrarezin’ny bagasy ity rahateo no nanamarika ny antony tsy nahatongavan’ny mpijery. « Tsy ampy tosika ny fampahafantarana ny fampisehoana… Kanefa anisan’ny manana zavatra kanto tokoa Imerina », hoy i Kolibera.
Anisan’ny nampiavaka ny « Riban-kiran’Imerina », omaly, ny fiakaran-tsehatra nataon’ny tarika Ramilison Besigara. Tsy fahita firy ny hiragasy na vakodrazana hoentina an-tsehatra sy ao anatina efitrano malalaka. Tehaka nirefodrefotra ny nandraisan’ny mpijery azy ireo sy ny tolotra nomeny, indrindra fa ny nahitana ilay zaza 6 taona efa tena kinga amin’ny dihy fanao amin’ny hiragasy.
Na tsy tonga maro aza ny mpijery, mendri-piderana ny mpikarakara ny hetsika tahaka itony satria anisan’ireo kanto madiva ho difotra ny karazan-kira fanao eto Imerina ka mila aseho sy asongadina indray.